Adolantsento miampita any amina��ny fahatanorana: Kihon-dalana goavana eo amina��ny fiainana��ny zanaka��olombelona – fanilo
A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena akory fa hentankentanim-po mazana ary raha sanatria tsy ampy tan-tsoroka avy amina��ireo ray aman-dreny dia mety ho eo mihitsy no ho loharanom-pahasimbam-piainany. Miova tsikelikely manomboka eo amina��io vanim-potoana io ny toe-batana satria manomboka mitsiry nono, ohatra, ny zazavavy ary manomboka maniry volon-kelika ny zazalahy. Ny ankamaroana��ireo adolantsento no efa mifampijerijery sy miditra tsikelikely amina��ny resaka��olon-dehibe toy ny hoe a�? I anona, hono, sipana��i anonaa�?, a�?I anona sy anona, hono, miarakaa�?. Mitohy avy eo rehefa miha lehibe kokoa eo amina��ny faha 16 sy 17 taona eo ny fifametraham-panontaniana hoe a�? ahoana ianao amina��ny anonaa�?, a�?ampidirina amina��ialahy ve na amin-drya��a�? dia hatrany hatrany. Saingy, indrisy moa fa tonga amina��ilay tononkira izay hoe a�? te ho anya�� fa tsy afakaa�? matetika, noho izay fahatsapana��ny ray aman-dreny izay fa tsy mbola azo antoka ho tomponandraikitra ny zanaka eo amina��io sokajin-taona io.
Mila sorohana ny fitrifanana
Matetika, araka izany, no mandrara ny fiarahana��ny adolantsento ny ray aman-dreny ary mivoaka ny teny hoe a�?mbola zaza saina, kely maika hanambady, fianarana aloha atao tsaraa��a�?. Mivoaka toy izany avokoa ny teny toa tsy voahevitra rehetra satria manahirana ny mifehy ny adolantsento noho izy ireo lasa be famaliana sy tsy mifidy vava avoaka ary mihevitra fa mandeha ho azy ny fiainana. Mety ve anefa ny fandrarana? Samy manana ny fomba fitaizany ny tsirairay fa ny zavatra tokony ho atao an-tsaina lalandava anefa dia mila sorohana ny fitrifanana��ireo zaza miala sakana satria ara-bakiteny tokoa rehefa tonga eo amina��io sokajin-taona io izay fialany sakana izay saingy na dia manao izany aza izy dia matetika tsy mampiasa saina hamonjy arofanina fa enti-po ary mety hanaotao foana.
Vahaolana ny fifampiresahana
Manoloana ny fivoarana sy fitobahana��ny tekinolojia dia miha mihena hatrany amina��izao fotoana izao izany fifampiresahana eo amina��ny ray aman-dreny sy zanaka izany. Tena ilaina indrindra anefa io satria tan-tsoroka fototra ho ana��ireo zanaka rehefa tonga eo amina��ny taona voalaza teo ireo a�?ankizya�?. Azo resahana tsara amina��ny zanaka ny antona��ny fiovana��ny toe-batany sy ny fetran-javatra tokony ho ataony sy tsy ho ataony satria heverina fa efa tonga eo amina��ny taona ahafahany manakatra izany izy. Ny fanafenana ireny indrindra aza no tena mahatonga azy hanandrakandran-doza sy hanaotao foana satria te hamantatra ilay antona��ny fandrarana atao aminy izy ireo.
Ho fehina��izay voalaza rehetra izay ary dia hindramintsika vetivety ny sombiny amina��ny tononkirana��ny mpanakanto, Olombelo Ricky, izay heverina fa mamintina izay zava-mitranga any anatina��ny manontolona��ny zanaka��olombelona any rehefa manomboka adolantsento izy. Hoy indrindra ny tononkira:
A�adolany te-ho any aminao
A�fa zaho mba te-hihira
A�akaiky tsy lavitra anao
A�A�A�A�A�A� A�Adaladalan-tsento aho
A�A�A�A�A�A� A�adalana��ny te-ho eny aminao
A�A�A�A�A�A� A�fa tsy afaka ho any
Te-ho any aho fa tsy afaka!
A�Te-ho any aho fa tapaka!
A�A�A�A�A�A�A�A� Tsy misy ho soratana aho
A�A�A�A�A�A�A� A�Tsy misy raha hambara aminao
A�A�A�A�A�A�A� A�Atosika��ireo tsiahy
A�A�A�A�A�A�A� A�Atosiny a��ndeha ho any aminao
A�Mba ilazao vaovao a��zaho
A�Izay zava-misy any aminao
A�Na ratsy na tsara!
A�A�A�A�A�A�A�A� Ampitso aho vao afaka!
A�A�A�A�A�A�A� A�rahampitso aho tsy tapakaa��a�?
Nanangona: Jaonary Mirija
viatec pharmacie modafinil and alcohol
Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany. A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena […]